यो तरकारी, रसदार र स्वादिष्ट, धेरै लोकप्रिय। सलाद र अन्य व्यञ्जन मा उपयोग, गर्मी मा खान आफ्नो खुसी। तर पनि राम्रो टमाटर र नुनीन। Salting टमाटर - सजिलो छैन। तिनीहरूले एक, स्वादिष्ट सामान्य नूनिलो, मसाले र जडीबुटी को aromas संग प्राप्त गर्न आवश्यक छ। धेरै मानिसहरू वर्ष सिद्ध व्यञ्जनहरु, प्रयोग गर्नुहोस्।
एक धेरै तरकारी गुणस्तर निर्भर गर्दछ। टमाटर कुनै क्षति संग, दृढ हुनुपर्छ। मूलतः टमाटर salting विशेष सामाग्री प्रयोग आवश्यकता छैन। यो तरकारी द्वारा राम्रो विभिन्न मसला अनुकूल छ। तपाईं साग, लाग्न सक्छ सहिजन पात, currants र चेरी, सौंफ, दालचिनी, लौंग, Rosemary, तोरी, tarragon र धेरै अन्य मसला र जडीबुटी।
टमाटर Salting अब ठूलो मात्रा मा हुन्छ। यो उद्देश्य, सानो बर्तन वा जार लागि। तयार तरकारी, बैंकों बाहिर राखे छन् मसाले र जडीबुटी संग एकान्तरण। उनीहरूले सकेसम्म भर्नको क्षमता रूपमा नजिक हो भनेर पक्का गर्नुपर्छ। टमाटर को 10 किलो डिल को एक मध्यम हरियो गुच्छा, एक सहिजन मूल, लसुन को बारेमा6टाउको, tarragon केही sprigs, एउटा सानो फली आवश्यक हुनेछ तातो खुर्सानी। लसुन स्लाइस र सफा विभाजन गरिएको छ। तातो मरिच बाला र बीउ देखि साफ र टुक्रा मा कटौती। कन्टेनर ठूलो छ भने, यो सारा राख्न सम्भव छ। सानो टुक्रा मा सहिजन कट छोड्छ। सबै सामाग्री कन्टेनर मा राखिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी पानी (उसिनेर र राम्रो ostuzhennoy) को 8 लिटर र नुन को 400 ग्राम हुन्छन् जो नुनीन बनाउन। टमाटर र नुनीन आरक्षित solitsya भर्नुहोस्। बित्तिकै उपलब्ध रूपमा खान्छन्। यो लसुन धेरै संग टमाटर salting। तिनीहरूले सुगन्धित र अलिकति ठिक हो।
नुनीन टमाटर प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। salting लागि टमाटर को 10 किलो र एउटै टमाटर आवश्यक छ। पनि आवश्यक कालो currant पात, नुन र तोरी ड्राई छन्। टमाटर क्रमबद्ध र राम्रो अप धुन। वेवास्ता वस्तुहरू हामी टमाटर गर्छन्। कन्टेनर धोए तल मा राखिएको हुन पात currants। शीर्ष तह टमाटर राखे। तिनीहरूले तोरी मा रोलिङ छन्। त्यसैले वैकल्पिक तहहरू सम्म कन्टेनर भरिएको छ। नुन को 300 ग्राम टमाटर मिश्रण र टमाटर भर्नुहोस्। कन्टेनर ठूलो छ भने, यो शीर्ष जुवा राख्न आवश्यक छ।
मा पुरानो दिन एक बैरल मा टमाटर salting प्रयोग। यो गर्न, हामी एक राम्रो गुणवत्ता काठ उत्पादन लिन। को बैरल पूर्व-धोए र धमाकेदार हुनुपर्छ। यदि यो सबै नियम गरेको छ, तपाईं सिलोफन मा राख्नु आवश्यक छैन। त्यो नुनीन सम्झना छैन। त्यसपछि तयार टमाटर एक बैरल मा राखिएको हुनुपर्छ। मसला र जडीबुटी थप्नुहोस्। 10 किलो मा तरकारी 50 ग्राम धेरै खोर्सानी सहिजन, 100 ग्राम currant पात, डिल 150 ग्राम, 100 ग्राम लसुन आवश्यक छ। मसला टमाटर तहहरू बीच विघटित। सबै नुनीन खन्याउन। यो प्रति पानी लीटर नुन को दुई चमचा लिन बनाउने। जुवा माथि राख्न निश्चित हुनुहोस्।
तपाईं परिपक्वता कुनै पनि डिग्री को तरकारी अचार गर्न सक्नुहुन्छ। हरियो टमाटर Salting एक सानो अब रहन्छ, तर परिणाम यो लायक छ। यो नुस्खा लागि ठूलो हरियो फल आवश्यक हुनेछ। तिनीहरूले मध्य र डम्प मा एक चीरा बनाउन आवश्यक छ। को भराई लागि लसुन, साग र अजवाइन लिन। सबै सामाग्री धेरै सूक्ष्मता कटौती छन्। यो भराई प्रत्येक टमाटर मा राखिएको छ। चिन्ता नगर्नुहोस् यदि यो एक सानो पिक हुनेछ। टमाटर को क्षमता धेरै तंग राखे, र भराई भित्र रहन्छ। तपाईं हट मरिच को एक टुकडा मा प्रत्येक टमाटर एक स्वाद लागि राख्न सक्नुहुन्छ। यी बैंकहरुमा राम्रो अचार टमाटर। प्रत्येक जार मा एक तेजपात राख्नु, र अझै पनि मरिच थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पोत गर्न नुन थप्नुहोस्। तीन-लीटर जार मा यो नुन तीन चमचा लिन आवश्यक छ। पानी उम्लिरहेको संग जार भर्नुहोस्। ढक्कन बन्द र solitsya kapron छोड्नुहोस्।
salting जब तपाईं आवश्यक विचार कुनै पनि मसला प्रयोग गर्न सम्भव छ। एक स्वादिष्ट र flavorful टमाटर प्राप्त गर्न मुख्य कुरा।
Manti कसरी कुक गर्न?
केक बच्चाहरु को लागि "मिसिन"
खुशामदभरा फल संग र बिना घरेलु पनिर बाट Cheesecake नुस्खा
बादाम केक: विभिन्न राष्ट्रका व्यञ्जनहरु को अनुभव
सोया सस मा चिकन खुट्टा गर्न कसरी सर्वश्रेष्ठ
व्यक्तिगत र समाज समाजशास्त्र
रोस्ट: एक नुस्खा। रोस्ट बीफ कसरी खाना पकाउनु?
"ओपेरा कार्टून अक्षर" antitank प्रणाली। आत्म-चालित विरोधी-ट्यांक मिसाइल जटिल "ओपेरा कार्टून अक्षर-एस"
संक्रामक रोगहरु को रोकथाम: प्रतिरक्षा सुधार
स्वेदजनक: प्रकार र प्रयोग को तरिका